Ungalokothi uthengise izingxenye eziphukile kungumgomo wethu, Sithatha lo msebenzi futhi siqhubeke nokusebenzisa njalo!
Sinezindawo zokugcina ezintathu, izinkulungwane zezingxenye esitokisini: imikhiqizo engaba yizigidi ezimbili zamadola i-Allen Bradley
Zonke izingxenye ziyi-100% entsha yasekuqaleni efakwe uphawu efakwe uphawu.
Isiqinisekiso kuze kube unyaka ongu-1 siyatholakala kuzo zonke izingxenye.
Sisebenza ngokubambisana nethimba lakho nekhwalithi yokuthola usizo, okuhlosiwe kwethu kungaphezu kokulindelwe ngemizamo yokubuyela emuva.
Ukuthengisa izinhlobo eziningi
Ngaphezu kweminyaka engu-10 yokuthumela isipiliyoni semikhiqizo ezenzakalelayo yezimboni, imikhiqizo yethu ifaka i-Allen Bradley, GE, Mitsubishi, i-Eaton, iLenze, i-Omron, njll.
Kusukela ngo-2003ï¼ŒHuiTong Industry Company Limited (i-HTI Hardware) igxile ezingxenyeni ezingaphezulu ze-PLC nemikhiqizo ethengisa kakhulu yokuthengisa, ithembelwa kwimikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukulethwa okusheshayo kanye nensizakalo ethembekile. Onjiniyela bezindlu ezisebenzela ngaphakathi bame ngemuva kwemikhiqizo ukunikela ngosizo lobuchwepheshe phakathi kweminye imisebenzi yobunjiniyela. Uthole udumo oluhle kusuka kumakhasimende.
Imikhiqizo ye-Allen-Bradley evela ku-Rockwell automation ifaka phakathi ukulawulwa okuhlanganisiwe kanye nezinkundla zolwazi, ukulawulwa kwezimoto ezihlakaniphile nezakhi zezimboni.
Abakwa-Allen Bradley PLC babeke indinganiso yokulawula okunengqondo yokuhlelwa. Ngezinhlobo zokulawula eziningi nosayizi ukulingana nezidingo zakho ezithile. Izinhlelo Zokulawula Ezinkulu njenge-Allen Bradley Guard Logix, i-ControlLogix, iSoftLogix, kanye nohlelo oludala lwe-Allen Bradley PLC-5. Izinhlelo ezincane zokulawula ezinjenge-Allen Bradley Compact Logix, i-1768 Compact GuardLogix Security System kanye ne-SLC 500 Control System. I-HTI Hardware futhi ihlinzeka ngokuphepha kwe-PLC's.